Mareykanka Iyo Xulufadiisa Oo Bilaabay Weerar Ka Dhan Ah Nuseyriga Bishaar Al-asad. – Bogga Calamada.com
Mareykanka Iyo Xulufadiisa Oo Bilaabay Weerar Ka Dhan Ah Nuseyriga Bishaar Al-asad.
Xilli maalmihii ugu dambeeyey madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu ku hanjabayay inuu jawaab ka bixin doono duqeyntii sunta kiimikada Nidaamku u adeegsaday ee dhawaan lagu garaacay magaalada Duuma ayuu Maraykanku qaaday tallaabo boor isku qarin ah.
Diyaaradaha dowladaha Ingiriiska, Maraykanka iyo kuwa Faransiiska ayaa duqeymo ka fuliyay goobo kala duwan oo kamid ah dalka Suuriya gaar ahaan deegaannada gacanta uu ku hayo Nidaamka Bashaar Al-Asad.
Goobaha ay diyaaradaha Reer galbeedku duqeeyeen waxaa kamid ah xarunta machadka baaritaanka cilmiga ee ku yaala magaalada Dimishiq, saldhig milliteri oo ku yaala magaalada Ximis, garoonka milliteri ee Al-Damiir, garoonka milliteri ee Bazza iyo meelo kale, waxaana dhamaantoda lagu tilmaami karaa iney ahaayeen duqeymo boor isku qarin ah oo aan xaqiijin wax hadaf ah.
Dad ku sugan magaalada Dimishiq waxay sheegeen iney arkayaan gantaallo ku hoobanaya xarunta machadka oo ku yaala xaafadda Barza ee magaalada Dimishiq, waxaana dowladda Maraykanka ay sheegtay in machadkaas uu qaabilsanaa hormarinta suntan kiimikada ee uu Nidaamku adeegsado.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo hadlay daqiiqado kadib markii duqeymuhu billowdeen ayaa shaaca ka qaaday in dalka Suuriya uu kasoconayo howlgal ay iska kaashanayaan dowladiisa, iyo dowladaha Ingiriiska iyo Faransiiska.
Trump ayaa weerar afka ah wuxuu ku qaaday dowladda Ruushka, isagoona uga digay iney si wado kusii socoshada wadada uu kuu tilmaamay iney tahay mugdi.
Haweeneyda maamusha dalka Ingiriiska Treza May oo hadashey waxay dhankeeda sheegtay iney ku amartay ciidamada Ingiriiska iney qaadaan howlgal xadidan oo lagu beegsanayo ahdaaf milliteri oo ku yaala Suuriya.
Maamulka Bashaar Al-Asad dhankiisa, wuxuu ku tilmaamaya duqeymaha dhacay duulaan qaawan oo lagu soo qaaday dal madax banaan, isagoona intaa ku daray in duqeymahan ay ku xadgudbeen shuruucda caalamiga iyo qawaaniinta u degsan golaha Amaanka.
Safiirka dowladda Ruushka u fadhiya dalka Maraykanka ayaa bartiisa Twitterka wuxuu kusoo qoray qoraal uu kaga hadlayo duqeymaha dhacay, isagoona ku tilmaamay waxa dhacay iney xadgudub ku tahay shakhsiyadda madaxweynihiisa Faladamir Butin.
Wuxuu ku hanjabay iney jawaaab cad oo muuqata ka bixin doonaan tallaabada ay qaadeen dowladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska.
Marka laga hadlo dhamaan duqeymaha dhacay oo qiyaas ahaan loo adeegsaday illaa iyo 30 gantaal, majiraan khasaare nafeed oo ka dhashey, waxaana keliya saameyntooda ku koobneyd burburka dhismayaasha la duqeeyey.
Maalmihii lasoo dhaafey intii uu Trump hanjabayay ayuu Nidaamku ka baaran degay tallaabooyinka uu qaadayo, waxaana hubka, ciidamada iyo saraakiisha Nidaamka laga daabulay garoomada iyo goobaha ay macquulka ahayd in la duqeeyo, iyadoona la geeeyey saldhigyada ay ku suganyihiin ciidamada Ruushka, halkaas oo wax duqeyn ah aanu ka dhicin.